इन्डियन मिडिया, मोदी र तिनका फ़्याउरालाई नेपाली नागरिकको जवाफ (भिडियो सहित) - PLA Khabar
इन्डियन मिडिया, मोदी र तिनका फ़्याउरालाई नेपाली नागरिकको जवाफ (भिडियो सहित)
2021-01-13 2021-01-13 Tulasi Nepal
यस लेखमा बताइने कुराहरु सर्वसाधारण इन्डियनहरुलाई भन्न खोजिएको होइन। सर्वसाधारण इन्डियन नागरिकहरूलाई हामी सदैव सम्मान गर्छौं। तर विस्तारवाद कुनियत, तुच्छ मनस्थितिका इन्डियन सरकारको उच्च ओहोदामा रहेका वौद्धिक जमात र त्यहाँको दलाल मिडियाले नेपाल माथि गरेको ज्यादती, घिन लाग्दो व्यवहार, सिमा अतिक्रमण लगायत नेपाली भूमिको सांस्कृतिक विरासतमाथिको डकैती बारे एक नेपालीको आवेगको भावनाहरु यस लेखमा प्रस्तुत गरिएका छन् । सबै शब्दहरू इन्डियाको थिङ्क ट्यांक (नीति निर्माण गर्ने कुबुद्धि भएका) विस्तारवाद विदेश नीतिको प्रोपोकाण्ड (प्रपन्च) मच्च्याउने मिडियाकर्मी, मिडिया च्यानललाई लक्षित गरिएको छन् ।
इन्डिया शब्दको अर्थमा अपराधी, असभ्य हुन्छ। १९ औं शताब्दि को अक्सफोर्ड शब्दकोशको पृष्ठ संख्या ७८९ मा खोज्ने हो भने यो कुरा पुष्टि हुन्छ। जस्तो नाम त्यही अनुसारको व्यवहार र सोही स्तरको चिन्तन भनेको यही होला, त्यसै खैरेहरुले कोर्रा सोठ्याउँदै गुलाम बनाएको होइन रहेछ। यिनीहरूको विचारधारा नै त्यही स्तरको हुन्छ। त्यसैकारणले सदियौं सम्म कहिले मुगलको त कहिले अंग्रेजको गुलाम रहे। आफूलाई धार्मिक योगी भन्न रुचाउने ढोंगी (मानसिक रोगि)को घटिया चरित्र र व्यबहार बारे आजको लेख छ।
यिनीहरुलाई खुला स्वतन्त्र भएर बाँच्नु भनेको के हो ? थाहा नै छैन। गुलामी नै यिनीहरूको आदर्श हो। स्वतन्त्र भयो कि आफ्नो पशु सरह औकात देखाउने यिनीहरूको प्रवृत्ति भएकाले नै सायद मुगलहरूको दास बने त कहिले अङ्ग्रेजहरूको गुलाम। स्वतन्त्र भएको सात दशक बित्दा नबित्दै फेरि आफ्नो पशु सरहको प्राकृतिक स्वभाव देखाउन सुरु गरिसके। हुन त गुलामको विचारधारा गुलामी भन्दा माथि उठ्न सक्दैन। गुलाम मानसिकताको अधिनमा रहेकाले आफुले जानेको गुलामी अरुमाथि थोपर्न खोज्नु पनि स्वभाविक नै हो।
आज त्यै गुलामी र दासताले भरिएको मानसिकतामा नेपाल निल्ने प्रयत्न के कसरी चल्दैछ ? यिनीहरूको सबै घटिया पनको नालीबेली लिएर आएका छौं। जाबो तिहाड जेलको कैदी रहिसकेको पत्रुकार चौधरी, त्यसको नापीले नापेको आधारमा सगरमाथा आफ्नो भन्छ भने त्यसको देश बचाउने नेपाली गोर्खा सैनिकले सिंगो इन्डिया दाबी गर्न मिल्दैन ? पत्रुकार चौधरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सिंगो इन्डिया नेपाल अधिनस्थ बनाउने अभियान किन नथाल्ने ?
अंग्रेजको गुलाम नेहरु पशुले जब आफु गुलामी बाट खुला पशु भएको अनुभूति गर्यो, नेपाललाई घटिया हरुकै देशमा गाभेर एउटै अपराधी असभ्यको देश बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राजा महेन्द्रलाई राख्यो। तर सधैं स्वतन्त्र रहेको राष्ट्रको स्वाभिमानी राजा महेन्द्रले हुन्छ, आजै त्रिकोणात्मक नेपाली झण्डा लालकिल्लामा फहराईदिउ भन्दिए। त्यसपछि पशु स्तरको दिमाग भएको नेहरूले इन्डियाको दीर्घकालीन योजनामा नेपाललाई कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेकाले अहिले मोदी नामको योगीको भेषमा ढोंगी र मनोरोगी त्यही पथमा दौडिने प्रयास गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यता लिएका देशले गर्नै नमिल्ने नाकाबन्दी पनि ती-तीन पटकसम्म गरेको छ। हाम्रो संविधानमा त्यसको धारा भएन भनेर नाकाबन्दी ! बिजुली चाहियो रे, नदी चाहियो रे, त्यसले खोजे जसरी हाम्रो देशको नीति चाहियो रे। नमाने फेरि नाकाबन्दी ! हाम्रो देशको एयरर्पोर्टमा त्यसको सेना राख्ने रे ! नमाने फेरि नाकाबन्दी। बिचरा भुकम्पले गाह्रो परेको बेलामा समेत नाकाबन्दी। कति अमानवीय तुच्छस्तरको झन्डु होला। हुन त गुलामलाई सम्मान, मानवता थाहा पनि हुँदैन।जतिसुकै कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन(जिडिपि) धेरै भएको, धेरै अर्थ(धन) कमाउने देशको सूचीमा नाम परेता पनि भीकारीको संख्या घटेको छैन, रेलको पटरीमा हग्नेको जमात उति नै छ। धेरै तारिफ भयो क्यारे ! अब कसरी नेपाल कब्जा गर्ने नियत राखेको छ यताबाट कुरा गरौं।
सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको ठाउँ नै खाली गराएर पछि स्वतः आफ्नो हुन्छ भन्ने रणनीति अनुरुप नेपालमा आफ्ना गोटी(दल नामका दलाल) पालेको छ इन्डियाले। त्यसैले कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी सबैलाई नेपाल बाट नेपाली खेदाउन र देश खाली गराउनका लागि प्रयोग गरिएको छ। जुनसुकै पार्टीले जितोस् यो देशमा कहिल्यै पनि रोजगारीबारे केही पनि गतिविधि हुँदैन। भएका सबै उद्योगधन्दा बन्द गराएपछि बाँच्नकै लागि भएपनि विदेश जानै पर्ने बाध्यता सृजना गराउन लगायो इन्डियाले। अहिले मान्छे बेचेर देश चलाएको छ दलालहरुले, पहिले सामान बेचेर चल्थ्यो। आजभन्दा तिन दशक अगाडी नेपालले ७० प्रतिशत निर्यात गर्थ्यो र ३० पतिशत मात्र आयात तर अहिले ९६ प्रतिशत आयात गर्छ। हरेक वर्ष ९२ प्रतिशतले घाटामा गइरहेको छ देश। नेपालका दलहरुलाई प्रश्न: भएका ती कारखाना किन हो बन्द गरेको, देख्दै छस् तेरो गल्तीले खाडीमा युवा मरेको ?
यिनीहरूको नीति: मान्छे बेच्ने अन्न किन्ने, झोले बाहेक अरु कोहि टिक्दै नटिक्ने।
नेपालको पहाड कन्दराले नेपालमा चाहिने उत्पादन गर्थे। पहाड कन्दरा लाई खाली गर्नको लागि पनि माओवादी परिचालन गरिएको थियो। माओवादीको उद्देस्य धेरै थिए ती मध्ये एक नेपाल खाली गर्ने थियो। पहाडमा भएका सबै नेपालीहरु भागेर शहर आउन पर्यो, ती सहरमा सबै जनसङ्ख्याको लागि रोजगारी एकाएक सृजना हुन संभव पनि भएन। त्यसैले बाँच्नकै लागि विदेश पलायन हुन पर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो।
यो कुरा बुझ्न बिधान श्रेष्ठ, गीता उपाध्याय र जे पापी मिलेर गाएको त्यो गीतको एक अंश लेख्न सान्दर्भिक हुनेछ नेपाली खै कुरा बुझेको मनपरी जनसंख्या बढेकोरु विदेशीको नोकरीको भर छैन फर्केर आउँदा घर छैन।
अहिले विवाह गर्यो की नेपाली बाहिरिन्छ प्रजनन हुने उमेरका नेपाली बाहिर भएपनि जनसंख्या बढेको बढ्यै छ। कसरी ? जनसंख्या बढेको होइन, इन्डियनलाइ नागरिकता बाँडिएको छ। इन्डियन मात्र होइन नेपाल अस्थिर गराउनको लागी तिब्बती शरणार्थी लगायत, छोटा पाकिस्तान मुद्दा बोकेर आएका मुसलमानलाई पनि नागरिकता बाँडिएको छ। तराईमा अस्थिरतामा मच्च्याएर नेपालले थेग्न नसक्ने भएपछि त्यो क्षेत्रबाट इन्डियालाइ पनि सुरक्षा चुनौती भयो भन्ने योजना अन्तर्गत तराई अस्थीर पार्नको लागि नागरिकता बाँडिएका हुन्। साथै अमेरिकाको चिन अस्थिर पार्ने योजना अन्तर्गत तिब्बत मुद्दा ब्यूँताउन तिब्बती शरणार्थीहरुलाई पनि नागरिकता बाँडिएको छ।
यो कुरा जुन दिन समस्त नेपालीले बुझ्छ। त्यो दिनबाट मात्रै नेपाल समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नेछ।
Posted in विचारTagged The Political Point, शिवगौरीदास (अनुप)